Alphabear: Time Across Time APK သည် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Alphabear: အချိန်တစ်ဝှမ်းစကား
Alphabear: အချိန် APK ကိုတစ်ဝှမ်းစကား
Alphabear: အချိန်တစ်ဝှမ်းစကားအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူများအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပြီး, Google Play ရဲ့ 2016 ပထမဆုံး "Standout အင်ဒီ" ဆုချီးမြှင့်ဆုရှင်ဖို့နောက်ဆက်တွဲပါ!
သင်တစ်ဦးပဟေဠိဇယားကွက်ပေါ်မှာစာလုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း။ သငျသညျအသီးအသီးကိုအခြားကပ်လျက်ဖြစ်ကြောင်းအက္ခရာများအသုံးပြုသောအခါဝံပေါ်လာ! သင်အသုံးပြုပိုစာလုံး, အပိုကြီးဝံရရှိသွားတဲ့, သင်ဝင်ငွေပိုအချက်များ။ ပါးနစကားလုံးများကိုစာလုံးပေါင်းအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ပါ!
သင်ပဟေဠိဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏အမြဲတမ်းစုဆောင်းခြင်းအသစ်ဝံဝင်ငွေလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားဝံအနာဂတ်ဂိမ်းထဲမှာသင်ကကူညီမှတက်ရှိနေသေးသည်နိုငျပါသညျ! သူတို့ကသငျသညျဝင်ငွေအချက်များတိုးမြှင့်, သင့် timer နေရာမှာတိုးချဲ့, ဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း, ပို။
မူရင်း Alphabear ၏ပရိသတ်များအတွက်အများကြီး-တိုးတက်လာသော "ဝက်ဝံမိန့်ခွန်း" တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ် - သငျစာလုံးပေါင်းစကားတို့ကိုအမြဲတူသောရယ်စရာကာတွန်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ All-သစ်ကိုတင်းပလိတ်များနောက်ခံနဲ့ထညျ့ကျားကန်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စမတ်အဘိဓါန်များနှင့်အခြား features အသစ် Alphabear2ကလုပ်နေတာနေချိန်မှာသင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါစေ!
ဒါကြောင့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလဲ? 2018 ရဲ့အကောင်းဆုံးစကားလုံးပဟေဠိဂိမ်းစောင့်ကြို! 🙂
- အချို့သောအထူးအဖွဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမှပြင်ဆင်ချက်များ / တိုးတက်မှုများ။
- မွန်းထမ်းရွက်ရဲ့တန်ခိုး၌ Fixed bug ကို။
- အခြားအသေးအဖွဲပြုပြင်မှုများ / အပြောင်းအလဲများကို။
98.81 ကို MB
Spry Fox က LLC
မျက်မှောက်စကားအကြို-K သည် ...